:: My Little World ::: Top 10 Countries Censoring the Web
Posted by Nay Nay Naing at 10/30/2008 11:08:00 PM
its shouldn't be ideology.
shouldbidiology :)
Friday, October 31, 2008 9:11:00 AM
စောစောကပြောတော့ ပထမဆု လိုချင်လို့ဆို….. တိုင်းပြည်ထိပ်တန်းရောက်တာ ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါကွယ်….
စစ်အစိုးရက သူတို့ အဖေ တရုတ်ကြီးကို အမှီလိုက်နေတာနေမယ်..ဟိုက နံပါတ် ၁ ရထားတာကို။
အင်း…..လူ့အလိုကို ဘဘသန်းမလိုက်နိုင်ပါလား။ ပိန်တဲ့လူက ၀ချင်တယ်….၀တဲ့လူက ပိန်ချင်တယ်….(အာယုဘောဇန တီဗီကြော်ငြာ)
Friday, November 07, 2008 4:57:00 PM